यस्ता छन् तुलसी सेवनको फाइदा !जाडो याममा निमोनिया लाग्नबाट बचाउँछ ! - Hamro Kalam
Home Bannernews यस्ता छन् तुलसी सेवनको फाइदा !जाडो याममा निमोनिया लाग्नबाट बचाउँछ !
हिन्दु धर्मावलम्बीहरुको प्रायस् घरमा तुलसीको मठ हुन्छ । तुलसी धार्मिक दृष्टिले पनि निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ । यसको पूजा पनि गरिन्छ । धार्मिक काममा प्रयोग हुने तुलसी मानव स्वास्थ्यका लागि लाभकारी हुन्छ ।
चिकित्सकहरूका अनुसार तुलसीमा सयौ रोग निको गर्ने क्षमता छ। यसमा पात, हाँगा, फूल, जरा, बीउ सबै उत्तिकै महत्व का छन्।
मानिस मृत्युशैयामा हुँदा प्राण त्याग्नुअघि तुलसीको बोटसागै राख्नाले तथा तुलसीपत्र खुवाउनाले मरेपछि मोक्ष पाउँछ भनी शास्त्रमा वर्णन गरिएको छ।
अदुवा, मरिच र तुलसीको मिश्रणको चिया पिउनुपर्छ, स्वास्थ्यमा निकै फाइदा गर्छ । तुलसीको चिया बनाउनका लागि पात चाहिन्छ । त्यसलाई सुकाएर चूर्ण बनाउनुपर्छ । त्यसमा राम्ररी पिसेको मरिच र सुख्खा अदुवाको सूठो मिसाउनुपर्छ ।
घाउ खटिरा आउँदा पनि तुलसीले राम्रो काम गर्छ । घाऊ भएमा पिपलको कोपिला र तुलसीको पात पानीमा पिनेर बिहानरबेलुका लेप गर्नाले बालतोड् घाऊ ठिक हुन्छ ।
यसले मुखको दुर्गन्ध हटाउन सहयोग गर्छ । नियमित रुपमा बिहान तुलसीको पात खाएमा मुखको दुर्गन्ध हटाउँछ ।
धेरै दिशा लागेमा ८,१० वटा तुलसीपात चौथाइ भाग जाईफल पिनेर खाएमा ठिक हुन्छ ।दिशामा रगत आएमा १,२ चम्चा तुलसीको गेडा आधा ग्लास पानीमा बेलुका भिजाएर बिहान खाने गरेमा ठिक हुन्छ ।
रूससँग गरेको आणविक हतियार सन्धिबाट फिर्ता हुने अमेरिकाको निर्णयप्रति चीन असहमत
सांस्कृतिक सम्पत्तिलाई आर्थिक समृद्धिमा बदल्नुपर्ने मन्त्री बाँस्कोटाको दाबी